Aluminom Tripolyphosphate, Zinc Phosphate, Glass Flake - Noelson
NOELSON ngwaahịa EZIOKWU
Iji chọta onye tụkwasịrị obi na ezigbo onye nrụpụta na onye mmekọ, biko gaa maka Noelson Chemicals.
AKPỌ ỌR AN AKWTKWỌ AKW -KWỌ AKW .KWỌ
Kwa afọ, nnọchi nchara nchara n'ihi nchara na-efu ihe karịrị $ 100 ijeri n'ụwa nile. Ihe pigmenti nke na-ebelata nrụrụ nrụrụ bụ mgbochi mmebi ahụ. Noelson Chemicals anọwo na-emepe emepe na n'ichepụta mgbochi corrosion pigments kemgbe 1996, anyị ngwaahịa mbio inorganic fillers ka ọpụrụiche mgbochi corrosion pigments.
PHOSPHATE Mgbochi mmebi
Noelson Chemicals anọwo na-emepe ma na-arụpụta Phosphate anti-corrosion pigments kemgbe 1996. Ngwaahịa anyị gụnyere sitere na Zinc Phosphate, Compound Zinc Phosphate, Phosphorus Zinc Chromate, Aluminium Tripolyphosphate, Orthophosphate & Polyphosphate na ụdịdị Phophates.
Ejiri otutu ihe eji eme ihe na acha uhie uhie
Ihe mgbagwoju anya di na agba bu ihe ndi edo edo edoghi anya ma obu ogige ndi nwere okpukpu abuo ma obu karia, otu oxide na abia dika ndi nnabata ma ndi ozo ndi ozo na-agbasakwa ya na lattice. arụ ọrụ a na-arụ ọrụ na okpomọkụ n'ozuzu 700-1400 ℃. Noelson Chemicals na-enye mpempe akwụkwọ zuru oke nke agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agbakwakwaሎkwa ya na-agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agbaji aga eji akwa ya ike.
IJE OXIDE Mmanụ
Iron oxide bụ otu n'ime ihe ndị kasị vasatail mgbochi corrosion pigments. Ngwongwo anyi na-acha uhie uhie, nke a na-acho site na uzo uzo ozo na ultramarine acha anụnụ anụnụ, bu uzo abuo nke iron oxide nke emere maka ndi ahia.
A na-eji eco-friendly na egosipụta ọtụtụ ihe na-acha uhie uhie. Noelson Chemicals raara nye mmepe na imepụta nke pigmenti pigmenti kemgbe 1996.
GLASS FLAKE & GLỌMARA MICROSPHERES
Gbaso Japanese Nippon Glass na British Glass Flake ụlọ ọrụ, Noelson Chemicals bụ ụwa nke atọ kachasị ukwuu na-emepụta Glass Flake. Ngwaahịa anyị sitere na C ruo E-glass flake, na iko microspheres na seramiiki microspheres.
KPỌT &R & & AKPỌ AKWTKWỌ AKW .KWỌ
Kemgbe ntọala ya na 1996, Noelson Chemicals enwetawo asọmpi asọmpi ya na mmezi na mgbochi. Ngwaahịa anyị na-enye ụlọ ọrụ na-eduga nkwụsi ike na isi ọnụ ahịa asọmpi.
Dị kachasị mma + Usoro okike + Uru ego, mee Noelson Chemicals ka ọ dịrị onye bu ya ụzọ na ịkọ ọdịnihu!
AHINR I AHNDR.
IHE ỌSIALREC AKW SPS.
Plastik & roba
EGO NA UGWU
Banyere Noelson Chemicals
Ntọala na 1996, Noelson Chemicals bụ onye raara onwe ya nye nke kemịkalụ ọkachamara pụrụ iche, Site na ntọala Noelson Chemicals Nanjing Ltd., Noelson Chemicals Shanghai Ltd. na Noelson Int'l HongKong, anyị na-etinye teknụzụ dị oke mma na mmepụta nke micro-powder , mgbochi corrosion, ọtọ, conductive and mgbochi static pigments. Anyị na ngwaahịa na-tụkwasịrị obi na ghọtara site isi mba aha ụdị.
NOELSON Isi ngwaahịa